Tọzdee, Machị 26, 2009 Tọzdee, Ọktoba 23, 2014 Douglas Karr
Nke a bụ obere ma na-atọ ụtọ post na nsogbu mkpuchi. Ejiri saịtị na ihe nchọgharị iji bulie akụrụngwa. Ha na-eme ya nke ọma oge ụfọdụ na nsonaazụ njedebe na-agbaji weebụsaịtị gị dị ike kama imelite ya oge niile ịchọrọ. Taa, mụ na ya na-arụ ọrụ Onye na -egwu JW, ihe nkiri Flash Movie nke na-adọta na ndepụta nke ihe nkiri site na faịlụ XML.
Nsogbu bụ na anyị na-emelite faịlụ ahụ mgbe niile na webinars ọhụrụ na klaasị ọzụzụ. Ọ bụrụ na ndị ahịa anyị nọgidere na-abịa na peeji nke ụbọchị ọ bụla, ọ ga-eburu ụdị nchekwa nke listi ọkpụkpọ ahụ ma gosipụtaghị ha ọhụụ kachasị ọhụrụ.
N'ihi ya, m ga-mbanye anataghị ikike na SWF Ihe koodu nke mere na ọ ga-eche na ọ na-ebu listi ọkpụkpọ ọhụụ oge ọ bụla.
Nke a abụghị naanị kemfe maka JW Player, ejiri m usoro a maka Google Maps mgbe ị na-emeso faịlụ KML nke na-agbanwe agbanwe. Naanị ịmepụta querystring na-enweghị usoro na sistemụ ahụ ga-ebugo faịlụ KML (nke pụtara nke ọma) oge ọ bụla onye ọrụ bịara. Ọ bụ mbanye anataghị ikike, mana ọ bụ ụzọ dị mfe iji wee gbanwee caching anya na ngwa ndị a na-enweghị nhọrọ.
Nice mbanye anataghị ikike 🙂